Gịnị bụ Micro SD kaadị na ebe a na-eji?
Micro SD bụ a nchebe na usoro nke na-eme n'aka na data nke onye ọrụ a na-echekwa n'ime a kaadị mere na ohere bụ mgbe mfe. Na okwu Micro SD okwu SD anọchi ala dijitalụ na maka otu ihe mere uru nwere ike na-enwe onye ọrụ na ala na afọ ojuju. Ọ na-na--ahụ kwuru na onye ọrụ nwere ike ijide n'aka na ngwaahịa na-abụghị nanị na-eji na ekwentị mkpanaaka ma na ọganihu na nkà na ụzụ ọ bụkwa na-ahụ kwuru na ọtụtụ obere Player na ọdịyo, video ngwaọrụ nwekwara kpọpụ a na-ajụ ka chekwaa ihe ọmụma. Kasị mma na ndị isi uru nke na-eji Micro SD bụ na onye ọrụ nwere ike ijide n'aka na data a nọ gaa na otu ọnọdụ na pụrụ n'ụzọ dị mfe zoro ezo anya na ma ọ bụ otu ihe ahụ mere na ọ bụ ụzọ kasị mma isi na-echekwa onye na ukwuu nkewa ọmụma nke na-ama onye nkịtị ihe n'etiti ndị ọrụ n'oge gara aga na ọbụna ugbu oge onye ọrụ na-ahụ na nke nke na-akpakọba Ama na-kpebiri na onye nwere ike inwe arụpụta ihe kasị mma maka na ịchekwa onwe ozi.
Olee otú naghachi ehichapụ foto site na Micro SD?
Wondershare Photo Recovery Bụ ihe kasị mma na ngwá ọrụ nke na-eme n'aka na data mgbake bụ bụghị ihe nke mgbe nile. Mgbe ọ na-abịa photos mgbe ahụ, ha na-ahuta ka otu nke kasị mma na ọkaibe ụzọ mee ka n'aka na ihe kasị mma na-nyere ka ọrụ na maka otu ihe ahụ ọ bụ-ahụ kwuru na fim nke Wondershare Photo Recovery bụ mgbe elu ka tụnyere ndị ọzọ software omume yiri genre. Iji nweta ihe kasị mma nke usoro ihe omume ọ na-gwara iji jide n'aka na usoro nke e kwuru ebe a na-abụghị nanị etinyere ma onye ọrụ kwesịkwara ime ka n'aka na ihe kasị mma na-nyere ka usoro na onwe site na-agbake foto na bụ maa ebe nchekwa maka ọrụ. Usoro bụ nnọọ mfe na-eso na ma ngwa pụkwara mere na ala na afọ ojuju.
1. The URL ie http://www.wondershare.com/data-recovery/photo-recovery-guide.html bụ na-ịga na ya iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi nsonaazụ kacha mma na ihe omume ebudatara arụnyere na-agba ọsọ na- isi interface:
2. The mbanye si ebe data bụ E weghachiri eweghachi na-ahọrọ na nzọụkwụ ọzọ na ọ ga-mere ozugbo mmalite button na-kụrụ:
3. The Doppler button a na-ahụ na-enwe na-eme ka n'aka na photos na-weghachiri eweghachi na-egosipụta enweghị ihe ọ bụla nke:
4. The onye ọrụ nwere ike họrọ photos ndị a ga-Ewepụtara na kwesịrị ijide n'aka na naghachi button na-enwe iji weghachi niile nke ahọrọ ndị na rụchaa usoro na zuru.
Olee otú ime a Micro SD kaadị mgbake na nile na otu mgbake ngwá ọrụ
Ọzọ, ọ bụ ihe kasị mma na nke kasị ọkaibe ngwaọrụ ndị pụrụ ime ka n'aka na mgbake na-eme na ihe kasị mma n'ụzọ. Onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na dị ka Wondershare Photo Recovery ndị ọzọ ngwá ọrụ nke Wondershare Data Recovery a na-eji jide n'aka na faịlụ na-abụghị nanị Ewepụtara ma ọ bụrụ na foto mgbake ngwá ọrụ ada ada mgbe ahụ Wondershare Data Recovery nwere ike inyere onye ọrụ iji nweta foto na ndị ọzọ na formats na ala na afọ ojuju na-enweghị na-n'ime ihe ọ bụla hassle mgbe niile. Ihe omume ahụ nwere kpọmkwem a haziri iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi nsonaazụ kacha mma na kwa ọkaibe Wondershare nkwado na mmekọrita nke na ibilite site n'oge ruo n'oge. Iji jide n'aka na ngwá ọrụ na-eji na kasị mma n'ụzọ ọ na-gwara iji jide n'aka na usoro a ga-kpọrọ aha n'okpuru-agbaso ke ido ahụ bụ ihe kasị eme ka n'aka na-arụpụta na-stellar:
1. The URL nke ngwaahịa a ga-pịrị ibudata faịlụ na wụnye ya
2. The faịlụ ụdị a ga-Ewepụtara bụ mgbe ahụ na-ahọrọ:
3. The faịlụ ọnọdụ bụ mgbe ahụ na-ahọrọ na-aga:
4. Ozugbo faịlụ na-eweghachi ndị ọrụ nwere ike ijide n'aka na ndị chọrọ na-natara na ndị ọzọ na-ekpe.
Uru na ọghọm nke Micro SD kaadị eji
-Esonụ na-Uru na cons na na-metụtara na ojiji nke Micro SD kaadị:
1. The data nke onye ọrụ na-anọgide mma n'ime a obere mgbawa na ike ga-enweta n'oge ọ bụla enweghị ihe ọ bụla nke.
2. The Micro SD kaadị bụ nnọọ mma na-eme n'aka na kasị mma na ndị ọkaibe ọrụ na-eji na mmekọrita nkewa data.
3. The Micro SD kaadị na-a mma isi iyi nke na-eme ka n'aka na ntụrụndụ stof na-agafere site na otu ngwaọrụ ọzọ.
4. The SD kaadị na-nnọọ uchu ka ha nwere ike-ezo si ụzọ na ala enweghị ihe ọ bụla mgbalị.
1. Ọ bụrụ na kaadị mebiri emebi mgbe ahụ data na-niile na-arahụ na-apụghị Ewepụtara n'ọnọdụ ụfọdụ mgbe niile.
2. Ọ bụkwa na-ahụ kwuru na Micro SD bụ nnọọ obere na-aba na ya mere ha nwere ike ikpîkpu na resultantly data ọzọ na-arahụ.
Atụmatụ na otú iji chebe site adịkwa data on Micro SD kaadị
Na-esonụ bụ ụfọdụ n'ime Atụmatụ na ga-agbasoriri iji nweta ihe doro ọrụ:
1. The Micro SD kaadị kwesịrị nọ n'ebe mmiri ma ọ bụ ndị ọzọ yiri bekee n'ime igbe na e mewo ka na-echekwa ha.
2. The Micro SD kaadị ga-eji ihe ókè-elekọta ma na ịdị uchu na nlekọta pụrụ iche kwesịrị iwere mgbe data a na-agafere.
3. The Micro SD kaadị kwesịrị nọ n'ebe okpomọkụ na ìhè anyanwụ na ọ ga-mere n'aka na ọ dịghị mgbe ha egbochi ndị data n'ime.
Olee otú Naghachi ehichapụ Photos si Sony Xperia Z
Olee otú Igosi BUSlink Data Recovery
Olee otú Naghachi ehichapụ Photo & Video si Nokia N8 / N9
> Resource> Naghachi> Micro SD kaadị mgbake